सिद्धार्थको निधनमा विक्षिप्त बनेकी शहनाज कसका लागि बनिन् वेहुली ? फ्यानले यस्ता तस्बिर देखेपछि उठाए प्रश्न (भिडियो हेर्नुस्) - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / सिद्धार्थको निधनमा विक्षिप्त बनेकी शहनाज कसका लागि बनिन् वेहुली ? फ्यानले यस्ता तस्बिर देखेपछि उठाए प्रश्न (भिडियो हेर्नुस्)
पञ्जाबकी कट्रिना कैफ र बिग बोस १३ फेम शहनाज गिल बिस्तारै सामान्य जीवन बिताउने प्रयासमा अगाडि बढिरहेकी छन् । शहनाज आफ्नो निकटतम साथी सिद्धार्थ शुक्लालाई अचानक गुमाउनु पर्दा निकै दुखी भएकी थिइन् तर केही समय ब्रेक लिएपछि शहनाज फेरि सबै काम सम्हाल्दैछिन् । योसँगै शहनाजलाई फ्यानबाट पनि उत्तिकै समर्थन मिलिरहेको छ । हालै सामाजिक सञ्जालमा शहनाजको एउटा भिडियो भाइरल भएको छ जसमा उनी दुलहीको अवतारमा देखिएकी छिन् ।
वास्तवमा प्रयोगकर्ताहरू भन्छन् कि सिद्धार्थको मृत्यु भएको केही समय मात्र भएको छ र शहनाज कसरी यसरी खुसी हुन सक्छिन्। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन् कि शहनाजले सिद्धार्थलाई माया गर्थिन, त्यसपछि उनको मृत्युको केही समयपछि कसरी यस्तो दुलहीको रूपमा देख्न सकिन्छ ? सिद्धार्थ शुक्लाको भदौ २ गते हृदयघातका कारण अचानक निधन भएको थियो । जब मात्र ४० वर्षको उमेरमा सिद्धार्थले अचानक यो संसार छोडे, सबै छक्क परे । यो खबरले शहनाजलाई निकै नराम्रो असर पारेको थियो । उनका धेरै भिडियो र तस्विर पनि भाइरल भएका छन्, जसमा उनी एकदमै पागल देखिएकी छिन् ।
शहनाजका परिवारका सदस्य र नजिकका साथीहरूले सिद्धार्थको अन्त्येष्टिपछि शहनाजले न त खाना खाइरहेका थिए न त राम्ररी सुतिरहेको बताए। बिस्तारै अब उनी आफ्नो काममा फर्किएकी छिन् र आफ्नो व्यावसायिक प्रतिबद्धता पूरा गर्दैछिन् तर प्रयोगकर्ताहरुले उनलाई अनावश्यक रुपमा ट्रोल गरिरहेका छन् । शहनाजको यो भाइरल भिडियो पनि निकै पुरानो हो । हाल शहनाज आफ्नो कमेडी फिल्म ‘हौंसला रख’ को प्रमोशनमा देखिएकी छिन् । यस फिल्ममा उनको नायक दिलजीत दोसाँझ हुन् । यससँगै केही समयअघि सिद्धार्थ र शहनाजको ह्याबिट भिडियो पनि रिलिज भएको थियो, जसमा सिद्धार्थलाई अन्तिम पटक देखेर फ्यानहरु निकै भावुक भएका थिए ।